Abantu asetshenziselwa konke ukuzivumelanisa ngokwabo, kuhlanganise Amakhasi zabo siqu ekuxhumaneni nomphakathi. Ordinary isikali okwesibhakabhaka nomhlophe abaningi babonakala yisicefe futhi ngokushesha nesithukuthezi. Ngakho-ke, abantu abaningi babheka izindlela sendlela ukushintsha ngemuva kule "VC". Abasebenzisi kukhona izindlela eziningi ukuthi kuzosiza ukujwayela isibonisi kumuzwa wakho isiyatholakala.
Ukusebenzisa amakhono isiphequluli "Orbitium"
Iningi lalabo abathatha uhlangothi ufuna ukushintsha Umklamo yokuxhumana, ubheke amakhono isiphequluli. "Orbitium" esanda kutholakala futhi ngokubaluleka kuthandwa phakathi abasebenzisi zokuxhumana. It ibekwe nje ilungelo labo ungamchitha "VKontakte" semali isikhathi.
Kuyo kukhona inkinobho "Shintsha Theme", okuyinto kwesokunene nezinhlanu kusuka phezulu. Isici yalesi siphequluli wukuthi umklamo isethi zizobonakala kubo bonke abasebenzisi zifakwe "VC" by zohlelo. Uma uya Ukukhetha, kuvula ngezihloko ezihlukahlukene yonke ukunambitheka phambi kwakho. Ungabuka futhi ukubeka intandokazi yakho.
Ngaphezu kwalokho, ungakha isakhiwo sakho siqu, ukusebenzisa isithombe eyithandayo noma isithombe. Lena enye yezindlela nephephile kanjani ukuba "EC" ukwenza ngemuva. Ukuze wenze lokhu, uthole imenyu ithebhu, okuyinto igcina isithombe sakho sangemuva akhethiwe. Kukhona uthole "Dala" inkinobho. Khetha yisiphi isithombe kusuka kumemori yekhompyutha yakho bese ukhetha kuye nombala scheme. Ngakho ungenza ikhasi lakho ngabanye.
Izandiso kusuka ku-Google
Kulabo abafuna ukushintsha zangemuva "BK", kodwa akafunanga ngesikhathi esifanayo ukunikeza isiphequluli sakho ozithandayo, onjiniyela-Google kukhuphukele nezinye izithasiselo ekhethekile. Ngesisekelo Ghrome okwamanje usebenza eziningana iziphequluli ezithandwa kwi "Yandex", "Rambler". Futhi ngamunye wabo kungenzeka ukufaka ikhomponethi ezengeziwe kuzoshintsha zangemuva "VKontakte" mahhala. Ungathola nathi isandiso ngezindlela okungenani ezimbili ephephile:
Kubaluleke ephephile, kufanelekile zonke izingxenye iziphequluli abasebenzisi ngokusebenzisa i-Chrome. Uma ulanda isicelo sakho ekhethiwe kukhompyutha yakho, kufanele uyifake bese uqale ukusebenzisa. Ngokwesibonelo, "VKoboi" isebenza ngale ndlela: udinga ukuthola on the Internet yimuphi umfanekiso bese uchofoze ngayo kwesokunxele igundane amadoda ekubunjweni. Uzobona imenyu yokuqukethwe lapho ungakhetha "Setha njengoba Wallpaper" VKontakte ".
Akhethekile izijobelelo kanye nezinhlelo
Kukhona inani elikhulu izijobelelo yenzelwe wonke iziphequluli, kanye nezinhlelo ukuthi ukubhekana umbuzo kanjani ukubeka ngemuva kule "VC". Phakathi kwabo kulula kakhulu ukusebenzisa ku uhlelo igciwane. Phakathi efakazelwe kungenzeka ukwaba Vkplagin, Vkmod futhi Vktema. Yibo futhi ngokuvamile kakhulu esetshenziswa.
Uhlelo lokuqala lihlanganisa inani elikhulu izandiso ukuba ulayishe kusuka umculo zokuxhumana namavidiyo, usebenzise smilies, setha fotostatusy. Futhi ngosizo "VKplagin" ungakwazi ukuxazulula inkinga kanjani ukushintsha ngemuva kule "VC".
"VKtema" ikunikeza ukukhetha kusuka kuka kwamakhulu ezithombe zangemuva, esethulwa eMihlanganweni Yesigodi ethi iwebhusayithi yesimiso okufaneleka kakhulu kunokunye. Ukuze kube lula umsebenzisi, bahlukene ngesihloko, thola ekahle kakhulu.
Isandiso "VKmod" - indlela engcono kakhulu kanjani ukushintsha ngemuva kule "VC". Lunikeza izithombe ngaphansi yonke ukunambitheka kanye isimo, okuyinto ebaluleke, kanye uhlelo olusha umbala.
Akuve kuyingozi ukushintsha izithombe zangemuva ukuxhumana nomphakathi
Iningi lalabo abathatha uhlangothi ufuna ukushintsha ukubukeka kwekhasi "VC" wakho ukulahla le venture ngenxa amathuba PC yakho ezingenwa ngamagciwane noma nokugenca ikhasi siqu. Ukuze ugweme lokhu, kufanele ukuba ubambelele le mithetho elandelayo:
Ungangeni ngemvume nephasiwedi ekhasini lakho kwamanye amasayithi.
Uma ukufaka izinhlelo zokusebenza ukugcina Uhlelo unqulo wesi arab inikwe amandla.
Uma ungafuni ukulahlekelwa imali, khona-ke bayeke Uhlelo, okuyinto ngaphansi kwebhaxa ecela umazisi ukuze ufake inombolo yakho yefoni. Ngale ndlela, i-nabakhwabanisi kunganciphisa kakhulu isamba semali ku-akhawunti mobile yakho. Zonke izindlela owethulwe ngenhla ihlolwe kakhulu, kodwa ephephile ukusebenzisa izandiso kusuka ku-Google. Ngaphambi kokuvula ukufinyelela wabasebenzisi, abathuthukisi ahlole ngokucophelela ke.
"S-Inthanethi", "MegaFon". "S-Inthanethi", "MegaFon" - indlela xhuma uphinde unqamule kwi inketho
Indlela ukususa ibhokisi leposi on the "Yandex" kuze kube phakade?
Yeka ukuthi kuhle kanjani izindaba "Instagram"? Igama lomsebenzisi "Instagram". Kanjani ukuqala ukuqhuba "Instagram"
Ukuhlaziya pti: kuyinsakavukela. Pti: abesifazane evamile
I-Torrevieja (Spain): okukhangayo, ukubuyekezwa
Ivan Bunin, "Ukukhuluphala". Izinkondlo futhi Eyiqiniso
Charles Dickens, "A Christmas Story" Sibutsetelo, isifinyezo kanye nokuhlaziywa